Huawei Mate9ဆန်းစစ်လေ့လာချက် - phablets ဘုရင်အသစ်၏သုံးသပ်ချက်နှင့်အမြင် Androidsis
Mate လိုင်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးပြည့်စုံခြင်း၊ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်နှင့်အထင်ကြီးလောက်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်တတ်သောအသုံးပြုသူများကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နယ်ပယ်တစ်ခုရရှိအောင်စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ သင့်ကိုပေးပြီးသား ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ရပ်မှာနောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံယခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏ Huawei Mate9သုံးသပ်ချက်၊ အာရှကုမ္ပဏီကြီးမှယခုအချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
ထို့အပြင် Samsung Galaxy Note7ကျဆုံးခြင်းသည်ပြိုင်ဘက်များအနေဖြင့် Samsung Note မိသားစု၏လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားသည့်တက်ဘလက်များဖြစ်သောစျေးကွက်ဝေစုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ရွှေအခွင့်အလမ်းပေးခဲ့သည်။ တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, Huawei Mate9တွင်နံပါတ်များများစွာရှိပြီးအသစ်စက်စက်၏ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။
1 Huawei Mate9သည်ထုတ်လုပ်သူ၏ DNA ကိုထိန်းသိမ်းသောဒီဇိုင်းတစ်ခုအတွင်းထူးကဲကောင်းမွန်သောသုတ်ဆေးများကိုပေးသည်
2 Huawei Mate ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ 9
3 ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလင်းနှင့်အတူထွန်းလင်းသော Full HD မျက်နှာပြင်
5 အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုနှေးကွေးစေခြင်းမရှိသော EMUI 5.0 သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပေါ့ပါးသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်
6 ဘက်ထရီ - Huawei Mate9သည်မကြုံစဖူးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ပြိုင်ဘက်များကိုထပ်မံလှည့်ပတ်သွားသည်
8 Huawei Mate9ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံပြခန်း
11 Huawei Mate9၏ဓာတ်ပုံပြခန်း
Huawei Mate9သည်ထုတ်လုပ်သူ၏ DNA ကိုထိန်းသိမ်းသောဒီဇိုင်းတစ်ခုအတွင်းထူးကဲကောင်းမွန်သောသုတ်ဆေးများကိုပေးသည်
၅.၉ လက်မအရွယ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်မျှော်လင့်တာက terminal ရဲ့အရွယ်အစားအတိုင်းအတာဟာကြီးမားတဲ့ colossus တစ်ခုပါ။ Huawei Mate 5.9 ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်သည့်အခါပထမဆုံးသောအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုမှာအာရှထုတ်လုပ်သူများ၏ phablet မိသားစု၏နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည် ဒါဟာအလွန်ပါရှိသောအတိုင်းအတာရှိပါတယ်။
၏တိုင်းတာမှုနှင့်အတူ 156,9 78,9 7.9 မီလီမီတာ ငါပြောနိုင်သည်မှာ Huawei Mate9သည်အလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူက၎င်း၏ဖန်သားပြင်၏ထောင့်ဖြတ်ထောင့်ဖြတ်ပုံများကြားမှပင်။ ဖုန်းကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ် အဆိုပါပွတ်သတ္တု finish ကိုနေသော်လည်းကောင်းတစ်ချုပ်ကိုင်ထား ကတည်ဆောက်နှင့်၎င်း၏နှင့်အတူ အလေးချိန် 190 ဂရမ် ၅.၉ လက်မ panel ရှိသော်လည်း terminal ကိုအတော်လေးပေါ့အောင်လုပ်ပါ။
၎င်း၏အရွယ်အစား၏ကောင်းမှုကုန်ကျမှုအများစုကိုဖုန်းရှေ့တွင်သာအသုံးပြုသည်၊ တကယ်ကောင်းစွာအသုံးပြုထားသည်။ ဘေးဘောင်များကိုအရှေ့ဘက်တွင်တွေ့နိုင်သည်အထူးသဖြင့် Mocha Brown မော်ဒယ်လ်။ ထို့အပြင်ထုတ်လုပ်သူသည်မီလီမီတာမျှသာရှိသောပါးလွှာသောအနက်ရောင်ဘောင်ကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဝိုင်းထားပြီးရှေ့ကိုပိုမိုအသုံးပြုမှုကိုပေးသည်။ ဒီမူဘောင်ကိုသိပ်မကြိုက်တဲ့အသုံးပြုသူတွေရှိပေမယ့်ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့မော်ဒယ်မှာရှေ့ကိုအဖြူရောင်နဲ့အတူသက်ရောက်မှုကပိုပြီးထူးခြားတယ်။
အပေါ်နှင့်အောက်ဘောင်နှစ်ခုလုံးသည်အလွန်အမင်းကျယ်ပြန့်ခြင်းမရှိပါ။ ထိပ်မှာရှေ့ကင်မရာအပြင်အာရုံခံကိရိယာအတော်များများလည်းပါရှိပါတယ်။ အောက်ခြေမှာတော့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လိုဂိုကိုတွေ့ရမှာပါ။ ထိုအ capacitive ခလုတ်? Huawei ကတော့ကျနော့်အမြင်မှာအောင်မြင်တဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုပါ။
ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထည့်ရန် slot ကိုရှာသည် နှစ်ခု nanoSIM ကတ်များသို့မဟုတ် terminal တစ်ခု၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးချဲ့နိုင်သည့် nanoSIM ကဒ်နှင့် micro SD ကဒ်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောစနစ်သည် Huawei အတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ပညာရှိရွေးချယ်မှု။
ဘယ်ဘက်ခြမ်းသို့ရွေ့လျှင်၊ Huawei Mate9၏ power ခလုတ်အပြင်အသံထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များတည်ရှိရာနေရာဖြစ်သည်။ သူတို့ကအရမ်းကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုကိုပေးတယ်, ပါဝါခလုတ်ကိုအပေါ်ဝိသေသကွမျးတမျးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောလေဖြတ်ခြင်းနှင့်လုံလောက်သောဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအပြင်, အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုသော့ကနေခွဲခြားရန်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါတူညီတဲ့အခြမ်းမှာသုံးခလုတ်အားလုံးရှိခြင်းမှလေ့ရှိတယ်, ဒါကြောင့်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်သူမျှမပြproblemနာရှိသည်, ကမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကဖို့အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
Huawei P9 နှင့်မတူသည်မှာ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ phablet အသစ်ကအပေါ်နားမှာ headphone jack ပါရှိပါတယ်ဖုန်းမှကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အနီအောက်ရောင်ခြည် port တစ်ခုအပြင်ပါရှိသည်။ အောက်ခြေမှာတော့ Speaker output နဲ့ USB C connector နှစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Huawei Mate9၏ကျောဘက်တွင်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးထူးခြားသည့်ဒီဇိုင်းကိုရရှိနိုင်သည် dual-LED LED flash ပါသည့်ကင်မရာနှစ်လုံး လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့်အောက်ခြေရှိအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
Un ယခင်မော်ဒယ်များတွင်တွေ့ရသောဒီဇိုင်းလိုင်းများကိုထိန်းသိမ်းသောကောင်းမွန်သောဖုန်း နောက်ဘက်တွင်မြင်တွေ့ရမည့်အတိုင်းအံ့သြဖွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်ထူးခြားသောကင်မရာနှစ်မျိုးတပ်ဆင်မှုနှင့်အတူနောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထူးခြားသည်။
ငါမင်းကိုရှာနိုင်မလား? ဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကို Huawei Mate9သည်ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေထုကိုမခံနိုင်သည်။ အာရှထုတ်လုပ်သူ၏ဆိပ်ကမ်းများမှပျောက်ဆုံးနေသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာသင့်အားအထင်ကြီးစေသောဖုန်းကိုပြproblemsနာမရှိဘဲနစ်မြှုပ်ရန်သင့်လျော်သောအိုင်ပီအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်သည်။ လာမယ့်မျိုးဆက်မှာဒီကာကွယ်မှုရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Huawei Mate ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ 9
ပုံစံ အိမ်ထောင်ဖက် 9
operating system EMUI7အလွှာအောက်ရှိ Android 5.0 Nougat
ဖန်သားပြင် ၅.၅ လက်မ IPS5နည်းပညာနှင့် Full HD9x 2.5 resolution ဖြင့် 1920 dpi ထိရှိသည်
Processor ကို ရှစ် core core HiSilicon Kirin 960 (73 GHz Cortex-A 2.4 နှင့် ၁.၈ GHz Cortex-A53 Core လေးခု)
GPU ကို မာလီ G71 MP8
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64 GB အထိ microSD မှတစ်ဆင့် 256 GB အထိချဲ့နိုင်သည်
နောက်ကင်မရာ ၂.၂ focal aperture / autofocus / Optical image stabilization / Face detection / panorama / HDR / dual-LED LED flash / Geolocation / Video recording လုပ်နိုင်တဲ့ dual MP MP + 20 MPX system ကို
ရှေ့ကင်မရာ 8p တွင် focal aperture 1.9 / video ဖြင့် 1080 MPX
ရှုထောင့် 156.9 78.9 7.9 မီလီမီတာ
စြေး 699 ယူရို
ဤအဝိသေသလက္ခဏာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, Huawei Mate9သည်အလွန်အစွမ်းထက်သော hardware configuration ရှိသည်။ Huawei သည်၎င်း၏ပထမဆုံးဓားများနှင့်ပရိုဆက်ဆာကိုအသက်သွေးကြောရန်ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းနည်းများကို ဆက်၍ လောင်းနေသည် HiSilicon Kirin 960 အီး၎င်းသည်ယနေ့တွင်ကုမ္ပဏီမှဖန်တီးသောစွမ်းအားအရှိဆုံး SoC ဖြစ်သည်။
clock speed ၂.၄ GHz သို့ရောက်ရှိနိုင်သော Cortex A73 cores လေးခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော octa core CPU နှင့် ၁.၈ GHz အမြန်နှုန်းရှိအခြား Cortes A2.4 Core လေးခုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနေတာပါ။ i6 coprocessor ၎င်းသည်ဆိုင်းထိန်းစနစ်တွင်ရှိနေလျှင်တောင်ကိရိယာ၏မတူညီသောအာရုံခံကိရိယာများကိုထိန်းချုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုလိုအပ်သောစွမ်းအားထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအာမခံချက်ရှိသည့်အချက်ပြမှုအဆင့်တွင်သင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ Huawei မှ၎င်းသည်၎င်းကိုယူဆသည် Kirin 960 သည် ၁၅% ပိုမို၍ စွမ်းအားရှိပြီး ၁၈% သည်ယခင် version များထက်ပိုမိုသည် ပြီးတော့တစ်လကြာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲဒါဟာဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ငါပြောတယ်။ terminal ကငါတို့မြင်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုအမြန်နှုန်းမှာမြန်ဆန်စွာရွေ့လျားစေတယ်။
Huawei သည် MediaTek, Qualcomm နှင့် Samsung မှပရိုဆက်ဆာများကိုအလုံအလောက်မပြုလုပ်ပါက၎င်း၏အကောင်းဆုံး terminals များကိုအောင်နိုင်မည်ဆိုပါကအလွန်ရိုးရှင်းသည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်၎င်းကိုမလိုအပ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များကိုမနာလိုသောပရိုဆက်ဆာများထုတ်လုပ်မှုတွင်အရည်အသွေးကိုရရှိခဲ့သည်။
ပြီးတော့ဒီစွမ်းအားကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလုံးဝမထိခိုက်ပါ Huawei Mate9၏စမတ်ဖုန်းသည်အမှန်တကယ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်မည့်ဖုန်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အပြင်, သူ့ Mali G71 MP8 GPU သည် ၄ ​​GB RAM ပါရှိသည် ဂရပ်ဖစ်အပိုင်းတွင်အရည်အသွေးမြင့်တက်စေပြီးအကောင်းဆုံးတောင်းဆိုမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။ ပြီးတော့ Vulkan နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်လျှင်သင်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများကိုခံစားလိုပါက Huawei Mate9သည်အကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ၅.၉ လက်မဖန်သားပြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပိုများပါတယ်။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလင်းနှင့်အတူထွန်းလင်းသော Full HD မျက်နှာပြင်
Huawei Mate9တွင်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည် ၅.၉ လက်မ IPS panel ပေါင်း ၂.၅D ဖန်သားပြင် ၎င်းသည်ဖုများနှင့်ပြုတ်ကျမှုများမှကာကွယ်ပေးသည်။ ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးကြည်လင်ပြတ်သားသောအရောင်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အပြင်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ချိန်ညှိထားသောဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး software ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်အပူချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
အ ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ထောင့်များသည်ကောင်းမွန်ပြီးတောက်ပမှုထိန်းချုပ်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ မျက်လုံးအကာအကွယ်မရှိဘဲနာရီပေါင်းများစွာဖတ်နိုင်သည့်အတွက်အကာအကွယ်ပေးသည့်စနစ်ရှိသည့်အပြင် terminal light သည်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းနှင့်အညီမျက်နှာပြင်၏တောက်ပမှုကိုအချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲပေးသည်။
9K panel တပ်ရန် Huawei Mate2ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည် ထုတ်လုပ်သူသည်အနိမ့်ဆုံး resolution ဖြင့်လောင်းကစားခြင်းဖြင့်အမှန်တကယ်ထူးခြားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်လုံးဝမှန်ကန်သည်။
ငါ 2K ဖန်သားပြင်နှင့်အတူဆိပ်ကမ်းစမ်းသပ်နိုင်ပါပြီနှင့်အနည်းငယ်တိုးတက်မှုသိသာသည်အဘယ်မှာရှိစာသားအများကြီးဖတ်နေမှလွဲ။ အမြင်အာရုံအဆင့်မှာခြားနားချက်, သိသာခဲယဉ်းပေမယ့်ငါဒီ panel ကိုအမျိုးအစားကိုယူသာအသုံးဝင်ကြောင်းပြော VR နည်းပညာ၏အားသာချက်နှင့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 4K panel များမရောက်လာမချင်း၊ virtual reality ၌အကြောင်းအရာကိုခံစားသောအခါ pixels များပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည့်တိုင်အောင် Full HD မျက်နှာပြင်သည်လုံလောက်မှုမရှိပေ။
Huawei စက်ပစ္စည်းများရှိ biometric sensors များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းပါတယ် ငါကြိုးစားခဲ့သောဖုန်းများအားလုံးမှသံသယရှိစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်သည်ဤထုတ်လုပ်သူ၏ဖြေရှင်းနည်းများကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ပြီးတော့ Huawei Mate9ကိစ္စကိုကြည့်မယ် ကျက်သရေနှင့်တူသောလက်ဗွေဖတ်စက် မည်သည့်ထောင့်ကနေယခုအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေရာအသိအမှတ်ပြုသည်။
အစဦးတွင် စာဖတ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဗွေကိုသိသောအခါအမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ပထမအကြိမ်ကချက်ချင်းပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ တိုးတက်မှုကိုသတိမပြုမိလို့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့မရဘူး။
သင့်ကိုစိတ်ကူးပေးဖို့၊ ဒီလမှာငါဖန်သားပြင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်အများစုကလက်ဗွေဖတ်စက်ကိုသုံးခဲ့တယ် တစ်ခါမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါနောက်ကျော၌၎င်း၏အခြေအနေကိုတကယ်ကြိုက်တယ်, ငါနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်အချို့အသုံးပြုသူများသည်စားပွဲပေါ်မှာမှီခိုနေစဉ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရှေ့မျက်နှာ၌နေရာချခြင်းခံရဖို့ပိုနှစ်သက်ပေမယ့်ငါကတက်ကောက်ဖို့အသုံးပြုကြပြီ အဲဒါကိုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ငါသည်သူ၏အနေအထားကိုပြီးပြည့်စုံသောထင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုနှေးကွေးစေခြင်းမရှိသော EMUI 5.0 သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပေါ့ပါးသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်
ငါထုံးစံအလွှာမကြိုက်ဘူး။ Pure Android သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများအလိုရှိလျှင် launcher ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောရမှာကနောက်ဆုံးပေါ် EMUI မူကွဲတွေကငါ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ် EMUI 5.0 Huawei သည်ထူးခြားသောအရည်အသွေးနှင့်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံများကိုရရှိခဲ့သည်။
စတင်ရန်အလွှာဖြစ်ပါသည် Android 7.0 Nougat ကိုအခြေခံသည်ဂူးဂဲလ်၏နောက်ဆုံးလည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သောတန်ဖိုးထားရမည့်အရာ။ ယခင်ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။
များစွာသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များသည်ကလစ်သုံးချက်သာရှိသည် ဒါကြောင့် terminal ရဲ့မည်သည့်အပိုင်းကိုမဆိုရောက်ဖို့အရမ်းလွယ်ကူတယ်။ Multitasking Management ကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းဖြင့်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုအနည်းငယ်ထိတွေ့လိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကမည်သည့် application များဖွင့်ထားသည်ကိုတွေ့နိုင်သည့်« cards »စနစ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ယခင်မော်ဒယ်များနည်းတူ Huawei Mate9တွင်လည်းရွေးချယ်စရာရှိသည် ကွဲပြားခြားနားသောအမူအရာများကိုသင်၏လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုချင်းစီတွင် application နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုနိုင်ရန်ခွင့်ပြုမည့် split screen function ကိုသက်ဝင်စေရန် (သို့) screenshot ကိုအသုံးပြုရန်။
ထိုကီးဘုတ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ SwiftKey Terminal မှာ standard ထွက်လာတာကြောင့်ဒီ Huawei Mate9နဲ့ရေးတာဟာတကယ့်ကိုပျော်ရွှင်စရာပါပဲ။ ပြီးတော့ "twin applications များ" mode ကိုအထူးအလေးထားပြီး EMUI 5.0 ၏တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Profiles နှစ်ခုနှင့်အတူ WhatsApp သို့မဟုတ် Facebook ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနံပါတ်နှင့်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှိသူများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းဖုန်းနှစ်လုံးမသယ်ဆောင်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Huawei ၏ interface အသစ်သည် အတုထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းပိုင်ဆိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိခြင်း၊
အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ဘဲအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်မကြာခဏအသုံးပြုသောအပလီကေးရှင်းများပိုမိုမြန်ဆန်စွာလည်ပတ်စေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဲဒါထိရောက်မှုရှိသလား။ ငါစိတ်ကူးမရှိ, စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုသတိပြုမိကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်အခါတိုင်းပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်, ဒီအင်္ဂါရပ်ကယ့်ကိုကျိုးနပ်သည်ဟုယူဆနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများသည်တပ်ဆင်ရန်ကိုနှစ်သက်ကြသည် bloatware ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာ Huawei သည်ခြွင်းချက်မရှိပါ။ Facebook, Booking (သို့) ဂိမ်းစာရင်းတစ်ခုသည်ဖုန်းပေါ်တွင်ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအမှိုက်ပုံးအများစုကိုဖျက်ပစ်နိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တောင်းခံထားခြင်းမရှိသောအပလီကေးရှင်းများလာခြင်းကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောအရာဖြစ်သည် အနည်းဆုံး EMUI 5.0 ကမ်းလှမ်းသောအလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမထိခိုက်စေပါ
ဘက်ထရီ - Huawei Mate9သည်မကြုံစဖူးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ပြိုင်ဘက်များကိုထပ်မံလှည့်ပတ်သွားသည်
La ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ၎င်းသည်ဖန်သားပြင်ကြီးတစ်ခုနှင့်အတူ terminal တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Mate လိုင်းတွင်၎င်းသည်၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Huawei Mate9နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပြောရလိမ့်မယ် ထုတ်လုပ်သူထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်.
အဆိုပါမိတ်ဖက်9တစ်ရှိပါတယ် 4.000 mAh ဘက်ထရီ အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအားသာချက်ပဲ။ သင့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန်၊ ပုံမှန် Spotify နာရီဖြင့်နေ့စဉ်သုံးခြင်း၊ အင်တာနက်ကြည့်ခြင်း၊ အီးမေးလ်များဖတ်ခြင်း၊ လူမှုကွန်ယက်ကိုရှေးရိုးစွဲအသုံးပြုခြင်းနှင့်နာရီဝက်ကစားခြင်းဖြင့်ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းသည် terminal သည်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်ရက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒုတိယနေ့တွင်သူသည်ည ၈း၀၀ နာရီတွင်အိမ်ပြန်ရောက်သည်။ သို့သော်စွမ်းဆောင်ချက်မှာထူးခြားသည်။
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ရန်သို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားရန်ရိုက်ရန်သင်၏ကင်မရာကိုညှစ်ပါကဘက်ထရီသည်အလွန်လျင်မြန်စွာအားကုန်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်သုံးသည် တစ်ရက်အတွင်းဖုန်းသည် ၄၀% အောက်သို့ကျဆင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မိနစ် ၃၀ အတွင်းဘက်ထရီ၏ ၅၀% ကိုအားသွင်းနိုင်စေရန် Huawei Mate9တွင်စံသတ်မှတ်ထားသောအလွန်မြန်သောအားသွင်းစနစ်ကိုထည့်သွင်းရမည်။ ငါဖုန်းကိုစမ်းသပ်တဲ့ပထမဆုံးနေ့တွေကမိနစ် ၅၀ မှာ ၆၀% အထိရောက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကြာတာကြာပြီ၊ ဒါပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့အားသွင်းမှုနှစ်ခုပြီးတဲ့နောက် Huawei ဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာတယ်။ ငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်ထုတ်လုပ်သူ။
ထိုအကြောင်း မိနစ် ၃၀ အတွင်းမှာ ၅၅% ဘက်ထရီအားကုန်သွားတယ် ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ထိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အတူကျနော်တို့တစ်နေ့တာအသုံးပြုမှုကိုအာမခံနေကြသည်။ အံ့သြစရာတော့အံ့သြစရာမဟုတ်တာကအချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှအားစိုက်ထုတ်မှုပြင်းထန်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပထမဆုံးမိနစ် ၃၀ ကနေ ၄၀ မိနစ်ဟာအမြန်ဆုံးအားသွင်းချိန်ဖြစ်တယ်။
ငါ၏အစမ်းသပ်မှုအရ, အပြည့်အဝတာဝန်ခံထက်နည်းနှစ်နာရီကြာပါသည်တစ်နာရီမှနှစ်ဆယ်မိနစ်နှင့်တစ်နာရီမှလေးဆယ်မိနစ်အတွင်း။ နောက်ဆုံး ၁၅% ဘက်ထရီသည်ဖြည့်ရန်အကြာင်းကြာသောဘက်ထရီဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါဆိုသည်ကား၎င်း၏အမြန်နှုန်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
Un လျင်မြန်သောအားသွင်းစနစ်သည်လူသိများသော Qualcomm Quick Charge 2.0 ထက်သာလွန်သည် ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နိုင်တဲ့ MediaTek Pump Express ကို အဆိုပါ Nomu S20 ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်က terminal နဲ့ပါတဲ့ charger ကိုသုံးရမယ်။ Huawei ကသူဖုန်းတွေမှာများသောအားဖြင့်ဖြန့်ဖြူးတဲ့ charger တွေထက်အနည်းငယ်ပိုတယ်။
Huawei Mate9ကိုပြောပါ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစရာမလိုပါဘူးငါကသေးငယ်တဲ့မကောင်းမှုစဉ်းစားသောအရာကိုအဘို့လူမီနီယမ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူဇော်သောဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူအသုံးပြုလေ့အရာတစ်ခုခုပေမယ့်။
နောက်ဆုံးငါကြိုက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုမှတ်ချက်ပေးချင်တယ်။ ဒါပါ Mate9၏သေတ္တာထဲတွင် USB Type C adapter သို့ micro USB ပါရှိသည်။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အိမ်သို့သွားသောအခါ၎င်းတွင်သင့်ဖုန်းနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ကြိုးမရှိသည့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ကင်မရာအပိုင်းသည် Huawei Mate (၉) တွင်ထင်ရှားသောအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် dual-lens စနစ် နှင့်အတူ၎င်း၏မဟာမိတ်ခိုင်မာစေရန်ထုတ်လုပ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေသည် Leica။ ပြီးတော့ရရှိတဲ့ရလဒ်တွေကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။
စတင်ရန်, Mate9တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုရှိပြီး 20 megapixels resolution ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး monochrome သတင်းအချက်အလက်များကိုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်များစုဆောင်းသော focal aperturef2.2 နှင့်အတူ focal aperture ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တူညီသော focal aperture ရှိပြီးအရောင်ပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းယူကြောင်းဒုတိယ 12 megapixel အာရုံခံကိရိယာကိုရှာပါ။
မှန်ဘီလူးနှစ်ခုစလုံးသည်မော်ဒယ်လ်ဖြစ်သည် Leica အနှစ်ချုပ် - H ကို 1: 2.2 / 27 ကျွန်တော်တို့ Huawei P9 နဲ့ P9 Plus မှာတွေ့ခဲ့ရပြီ။ ဒီပေါင်းစပ်မှု၏ရလဒ်သည်အရောင် (သို့) အဖြူနှင့်အဖြူဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများကို 20 megapixels ရောက်ရှိစေသည်။ Mate9သည်အစစ်အမှန် 20 megapixel ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးသည့်အရောင်များကို interpolate လုပ်ရန် Mate XNUMX သည်အရောင်များနှင့် monochrome mode တွင်ဖမ်းယူထားသောပုံရိပ်များကိုယူဆောင်သွားသောအခါလှည့်ကွက်သည်ပုံသဏ္processingာန်ပြုပြင်ခြင်းတွင်ဖြစ်သည်။
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အထူးအလေးပေးသည် bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှု ၎င်းကို Huawei Mate9ဖြင့်ရရှိပြီး၎င်းသည်ဖုန်း၏ကင်မရာအက်ပ်ရှိ Extended aperture parameter မှတဆင့်သက်ဝင်သည်။ ဒီ mode နဲ့ဖမ်းယူထားသည့်ဓာတ်ပုံများသည်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖမ်းယူခြင်းပြုလုပ်ပြီးပါက၎င်းသည်၎င်း၏အားကောင်းသောအပြောင်းအလဲဆိုင်ရာဆော့ဖ်ဝဲကြောင့်ဓာတ်ပုံ၏အကျယ်အနက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိုအခါ software ကဤကိစ်စတှငျအများကြီးကူညီပေးသည်။ Huawei Mate9ကင်မရာအပလီကေးရှင်းသည်စစ်ထုတ်စက်များနှင့်များပြားစွာရှိသည် ဓာတ်ပုံချစ်သူများကိုနှစ်သက်မှာပါ။ အထူးသဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန် monochrome mode ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် mode ကိုမမေ့နိုင်ပါ၊ သင့်အားကွဲပြားခြားနားသောကင်မရာ parameters များကိုပြောင်းလဲခြင်း (focus or white balance)၊ ဓာတ်ပုံနယ်ပယ်ရှိကျွမ်းကျင်သူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ပုံများကို RAW format နဲ့သိမ်းပါ။
သောကိုမီးမောင်းထိုးပြ အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ခြင်းက 2x hybrid zoom ကိုဖန်တီးနိုင်သည် Optical zoom အဆင့်သို့မရောက်ရှိပဲလက်ခံနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသောဒီဂျစ်တယ်နှင့်သင်အာမခံထားသည်မှာသင့်အားအခက်အခဲတစ်ခုထက်မကကယ်တင်လိမ့်မည်။
အဲဒါပြောဖို့ Mate9ရဲ့ကင်မရာရဲ့ focus speed ကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်အလွန်မြန်ဆန်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောရိုက်ကူးချက်များကိုပေးသည်။ နောက်မှဖုန်းနှင့်အတူရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများစွာကိုသင်ချန်လှပ်ထားလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့်သင်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင်မြင်နိုင်မည်။
အ အရောင်များကိုအလွန်ချွန်ထက်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြည့်ရှုပါအထူးသဖြင့်ညအလင်းရောင်ရှိသည့်အပြုအမူများကြောင့်အလင်းရောင်ကောင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်။ Mate9ကင်မရာများဖြင့်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများသည်အထူးသဖြင့်သစ္စာရှိကြောင်းဖော်ပြလိုသည်။
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ရုပ်ပုံများကိုအရောင်တောက်တောက်ဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံး HDR ကိုအသုံးပြုထားသည့်အခြားအဆင့်မြင့်ဖုန်းများကဲ့သို့အရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်ုပ်သည်ဤရွေးစရာကို ပို၍ နှစ်သက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပုံကိုကုသလိုပါကကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ထားသောဖမ်းယူနိုင်မှုများကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်ရရှိနိုင်သည့်စစ်ထုတ်စက်အမြောက်အများကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy S7 နှင့် S7 Edge ၏ကင်မရာ (သို့) LG G5 ၏အထင်ကြီးလောက်သောကင်မရာသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းအတာအထိရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Huawei Mate9ဖြင့်ရရှိသောဖမ်းယူမှုများသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်အဆုံးတွင်အနှေးနှင့်အမြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပင်သူတို့ကိုသာလွန်။ နှင့် bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကစားနိုင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 4K format နဲ့တစ်စက္ကန့် ၃၀ နှုန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
La ရှေ့ကင်မရာ၊f/ 1.9 ၏ focal aperture နှင့်အတူ ၎င်းသည် 8 megapixel မှန်ဘီလူးများကြောင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးကောင်းမွန်စွာပြုမူလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းသောဖမ်းယူမှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်း၊ selfies ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်မှားယွင်းသောမဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။
Huawei Mate9ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံပြခန်း
Huawei ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်။ အာရှကုမ္ပဏီကြီးသည်စျေးပေါသောတရုတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်၏ပုံရိပ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Samsung နှင့် Apple တို့လိုနာမည်ကြီးများကိုမနာလိုစရာမရှိသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည့်ကဏ္inတွင်စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
သူနှင့်အတူရှိပြီးသား Huawei P8 Lite၊ အထင်ကြီးလောက်သောကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကြံပေးခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Huawei P9 အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ရောင်းချခဲ့ရသောယူနစ် ၉ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်သော Huawei သည်ဤတွင်ဆက်ရှိနေရန်သတိပေးသည်။
ငါသည်ဤကြောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်မီ Huawei Mate9သည် Huawei မှယနေ့တိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များပါ ၀ င်သည့်၎င်းနှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ကွဲပြားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ စျေးနှုန်းကတော့ယူရို ၆၉၉ ပါ။ အဲဒါကကျွန်တော့်အတွက်အတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရပါတယ်။
Galaxy Note7ပြိုလဲပြီးတဲ့နောက် phablet ဈေးကွက်မှာဘုရင်အသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ Note မိသားစုကဈေးကွက်ထဲပြန်လာမလားမသိဘူး။ ကိုကိုးထုတ်လုပ်သူကအလွယ်တကူလက်လျှော့အရှုံးမပေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Huawei Mate9လိုမျိုးပေါ့ ဒါကကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲမှာဒီလိုသာယာသောအရသာတစ်ခုကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကအစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာသေချာတယ် phablet ဈေးကွက်ပိုင်ရှင်ကိုသရဖူဆောင်းမည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစစ်ပွဲသည်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူကိုများစွာအကျိုးရှိစေလိမ့်မည်။
Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် 9
Huawei Mate9၏ဓာတ်ပုံပြခန်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei Mate9သည် phablet ဈေးကွက်၏ဘုရင်သစ်ဖြစ်သည်
Nokia D1C ကိုလာမည့်နှစ်တွင်မူကွဲနှစ်မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်